Maitiro ekugovana mifananidzo kana mavhidhiyo kubva kuGoogle Mifananidzo neWhatsApp | IPhone nhau
Maitiro ekugovana mifananidzo kana mavhidhiyo kubva kuGoogle Mifananidzo neWhatsApp
Musangano wekupedzisira wevagadziri uyo Google wakabata mazuva mashoma pamberi peApple, chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva izvo vashandisi vazhinji vaifarira yaive mharidzo yeGoogle Mifananidzo, isingagumi yemifananidzo yekuchengetedza sevhisi uko iyo yeMountain View inotibvumidza kuchengeta ese mapikicha atinotora kubva kuchinhu chedu kana kuti atakatochengeta pakombuta yedu mahara zvachose chero bedzi resolution yezvimwe isingapfuure 16 MPX resolution uye vhidhiyo yacho haisi yakanyorwa mune resolution yakakwira kupfuura 1080p.
Apple yaigona kutodzidza nekupa, handichatauri kuchengetedza kusingagumi muICloud drive, asi yakakura nzvimbo yekuchengetera kune vese vashandisi vane kana kutenga chishandiso chine hukuru hwakakura senge 64 uye 128 GB modhi, kupfuura yekutanga Mukutsinhana. , nekungoita backup yeiyo system, iyo 5 GB inowanikwa haichakwanise kushandiswa chero chimwe chinhu. Ngatione kana munaGunyana Apple inotipa mufaro uye inowedzera nzvimbo yemushandisi wega wega muICloud Drive yemahara, sezvo mumwedzi ichangopfuura yanga ichiwedzera nzvimbo dzedata rekambani munyika dzakasiyana siyana.
Goverana mifananidzo / mapikicha kubva kuGoogle Mifananidzo neWhatsApp
Kutanga tinovhura iko kunyorera uye toenda kune iyo Chikamu chemifananidzo.
Mukati meMifananidzo, tinya pamufananidzo kana vhidhiyo iyo tinoda kugovana kuburikidza neWhatsApp.
Ipapo isu tinodzvanya pane share icon iri pazasi kuruboshwe rwechidzitiro uye mune yekudonha-pasi menyu tinodzvanya paWhatsApp.
Hatigone chete kuigovana kuburikidza neWhatsApp, asi isu tinogona zvakare kuigovana kuburikidza neTeregiramu, Twitter, SMS, email vatengi kana kuvhura mune chero application iyo inotibvumidza isu kugadzirisa iyo mifananidzo pane yedu kifaa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugovana mifananidzo kana mavhidhiyo kubva kuGoogle Mifananidzo neWhatsApp
Ini ndoda magumo maererano nemusoro wechinyorwa ... (irony)
Ini handinzwisise kuti sei kuisa WhatsApp wobva wati iwe unogona zvakare kushandisa Teregiramu, Twitter nezvimwe ... ndinofunga ivo vese vane kukosha kwakafanana!
Kuisa chete 5GB yemahara ndangariro muICloud zvinosiririsa. Ini handizive chimwezve chandinotora kuti andirege ndichizviita. Ndine iPhone6, 64gb, mapikicha nemavhidhiyo uye ini ndinongovachengeta muGoogle foto, ndine mimhanzi diki, vanoita kuti zviome kwazvo.
Uye hongu, ndinoda kukwanisa kuchengeta kopi yekuchengetedza zuva, sepakutanga.
Zvinonyadzisa, kuona kana mabhatiri achiwana zvishoma munaGunyana.
iFixit gutters yechitanhatu-chizvarwa iPod uye inosimbisa 1GB ye RAM
Apple nekukanganisa ichivharira Apple Music paPods